Green asparagus kirimu - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Makirimu40 maminitsi4 vanhu
Handina kumbobvira ndaravira rakapfuma asparagus kirimu! Iine chimiro chakanyanya yakanaka uye yakasviba panguva imwe chete asi isina kumonyoroka zvachose. Pamusoro pe, asparagus Iwo akakodzera kune chikafu nekuti ivo vane diuretic zvakanyanya.
Vazhinji venyu muchashamisika kuti chakareruka sei kana iine kirimu mukushongedza kwemufananidzo. Hongu, chakareruka nekuti isu tinoshandisa Puleva brand yekubika kirimu iyo inongova ne5% mafuta, kusiyana nemamwe ese ekubikisa mafuta ane pakati pe15 ne18%. Zvakakosha usadzime ichi chinongedzo, sezvo ichiwedzera kubata kweukobvu kukirimu uye panguva imwe chete ichirerutsa hunhu hwakasimba hunogona hweasparagasi.
Ndakaedza iyi recipe kekutanga mune yakakosha mwenje Thermomix® kosi uye ndakaida. Ini ndaiperekedzwa nasisi vangu avo, vasina lactose vasingashiviriri, vanonzwa kugadzikana zuva rega rega vachitevera chikafu chisina mukaka. Pane imwe nguva akabvunza kana kirimu yaigona kutsiva kudzivirira lactose asi isingarasikirwe nekirisiki inonaka? Ndipo patakaona kuti pane mafuta ezvemuriwo, izvo hauna lactose yekusashivirira kana vegans.
Ini ndoda kutora mukana kubva pano kuenda waita hako kuna Beatriz, de las Rozas, nekuda kwemutsa wake mukugadzirisa kusahadzika kwedu uye kufarira kwake mublog.
1 Green Asparagus Cream
Creamy, inonaka, yakajeka. Saizvozvowo iri kirimu.
Kubika nguva: 40M
Nguva yakazara: 40M
2 mashanga egirini asparagus
30 g mafuta omuorivhi
1 wepakati anyanisi (150 g approx.)
1 zucchini, peeled uye akachekwa (350 g approx.)
600 g yemuriwo muto
1 pini pevhu pepuru nhema
Isu tinoisa mafuta mugirazi uye chirongwa Maminitsi makumi maviri, tembiricha yevaroma, kumhanya 3.
Zvichakadaro, isu tinosuka asparagus uye kubvisa yakaoma chikamu chegunde. Isu tinozvipatsanura kuita zvidimbu zviviri kana zvitatu uye tinochengeta yolk zvakasiyana.
Wedzera asparagus yolks uye sunga ivo Maminetsi maviri, tembiricha yevaroma, inopesana neiwachi, kumhanya kwepuni. Kana tangosungirwa, tinovabvisa pasina kubvisa mafuta uye nekuachengeta.
Wedzerai hanyanisi mugirazi uye mucheke 4 masekondi, kumhanya 4 uye tobva tafura Maminitsi makumi maviri, tembiricha yevaroma, kumhanya 4.
Ipapo isu tinoisa zucchini uye asparagus mugirazi uye chirongwa Masekonzi mashanu, kumhanya 4.
Ipapo isu tinopisa panguva Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 2.
Wedzera muto, munyu uye mhiripiri uye chirongwa 25 maminetsi, 100º, kumhanya 1.
Wedzera iyo Puleva mwenje cream (chengetera mapuni maviri ekushongedza) uye chirongwa 1 miniti, 90º, kumhanya 4.
Tinomirira maminetsi mashoma kuti tembiricha idonhe zvishoma uye tinopwanya 2 maminetsi, inofambira mberi kumhanya 5-10.
Shandira iyo inopisa kirimu uye shongedza pamwe yakachengetedzwa asparagus matipi uye mashoma madonhwe ePuleva mwenje kirimu.
Mamwe mashoko - Yakapiswa senge asparagus
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Nguva dzose, Soup uye mafuta, Muriwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Soup uye mafuta » Green Asparagus Cream
Iyo asparagus yakasvibira uye ini handifambidzane zvakanyanya, hauone here iyo yakasimba flavour iyo ine yakawandisa?
Nekuti iwo maratidziro acho akanaka nemaHeberu zvaari.
Edza izvo, tinozvida, zviri nyore kwazvo uye hautombo cherekedza iyo yakasimba kunaka kweiyo asparagus. Murume wangu haabvi pasiparagasi yemusango uye akazviwana zvichinaka.
Panzvimbo pekirimu iyoyo iwe unogona kushandisa akakodzera evaporated mukaka ?? kutsvoda
Iyi imwe sarudzo, iyo inogona zvakare kuwedzera yakanaka kubata. Edza uye utiudze kuti sei.
Kutaridzika kwakanaka sei, Silvia! Nenzira, chinhu changu here, kana gore rino asparagus yemusango inodhura kwazvo ????
Manu, hachisi chinhu chako, zvinodhura asi ndinovada uye kirimu ino inobuda zvikuru. Ini handirambe kusazviita, ndinozvikurudzira.
Kutenda kwangu kwechokwadi nekuzvipira kwako. Mapoka makuru uye mharidzo zvakare. Sezvo ini ndiri newbie ndichaenda zvishoma zvishoma asi ndine chokwadi chekuti ndichafara ndichishandisa thermomix neruzivo rwako.
Ndinokutendai zvikuru nemashoko enyu, ticharamba tichiisa mapepa akareruka anotibatsira isu tose.
husiku hwakanaka, ndinofara newe uye maresipi ako. Ndine thermomix kweinopfuura gore asi matekinoroji matsva haaendi zvakanyanya neni asi zuva rega rega ini ndinopinda peji rako uye ndinokurumidza kuteedzera mabikirwo, izvozvi ini ndangoita chiuno nemuto wayo wePedro Ximenes uye pint yakanaka. Ndokutenda zvikuru.
Ndiri kufara chaizvo kuti unofarira mabikirwo edu. Iwe uchatitaurira isu kuti sei nyoro nyoro nemuto, tinozvida.
Iyo nyoro nyoro, ini ndinobva kuVillamanrique (Seville) uye nhasi tinopemberera Andalusia Zuva uye ivo vatondikorokotedza, ini ndagadzirawo tuna empanada uye yakasarudzika. maita nekundipindura nekiss
m. Carmen akadaro
Ndatenda zvikuru nemabikirwo enyu. Ndinochida.Ndinoronga kugadzira kirimu iyi yeasparagus.
Pindura kwandiri. Carmen
M. Carmen, kirimu ino yakapfava, kirimu yauinayo ndeye nyowani ine 5% mafuta, izvo zvishoma uye zvinopa kubata kwakakodzera. Edza uye undiudze zvaunofunga.
Flora kuenderana nemamwe mazita akadaro
Ini ndaivewo mune iyi kosi yakajeka uye zvaitaridzika kunge zvinonakidza, kashipiragimu kirimu yakandinakidza, asi chakandifadzawo yaive tsuro nemakwenzi akanaka, zvokwadi, ndakazviita mangwanani ano masikati uye yaive yummy… kwaziso.
Aya makosi anofadza, kunze kwekuona ichikura, takaiyedza uye pakati pedu tese mazano mazhinji matsva anopiwa.
NDINOTENDA NEZVINHU ZVAKABUDA ZVAKANAKA uye ZVAKASIYANA
Ndiri kufara kuti unofarira mapapiro eAngelines. Ndatenda nekutitevera. Shuwiro yakanakisa
Ndiri pablog rako!… Kufungidzira zvakadii !! 😉
Sekutaura kwandakakuita patakasangana, ndiri mumwe wevateveri vako vakuru. Ndiri kufara kwazvo kuti ndaibatsira.
Kirimu iyi inonaka. Mukomana wangu haatombooni iyo asparagus uye pandakagadzira iyi recipe, ndaifanira kumunyengedza nekumuudza kuti yaive zucchini kuti azame ... Akapedzisira adya ndiro mbiri kamwechete!
Ini ndinoda yako blog!
Ndatenda Bea, nerubatsiro rwako rukuru uye nekuve muteveri akatendeka kudaro. Ndiri kufara kuti unofarira mabikirwo edu uye kuti unokurudzirwa kuyedza zvinhu zvitsva navo.
Kutsvoda kukuru uye ndinotarisira kusangana newe mune dzinopfuura kosi imwe. Wakanga uri mufaro!
MARI VARIMI VAQUERO akadaro
Ini handidi asparagus, yakasvibira zvakanaka sezvavanotaura. Kana iyo colabacin asi ini ndakagadzira kirimu yako uye izvi zvakanaka chaizvo saka ndiri kuzoshinga neiyo asparagus imwe sezvo ichiita sependi …… ini ndichakuudza nezvazvo.
Pindura kuna MARI CARMEN VAQUERO
Chokwadi unoifarira nekuti ini ndakatoiyedza kakati wandei nevanhu vasina kana girini sekutaura kwako uye vanoida. Uchatitaurira.
Anogona here iwo matipi easparagus aunochengeta sekushongedza, ndinogonawo kuvawedzera kukirimu kuti igare kwenguva refu ???
Ndatenda zvikuru nekuda kwemaresipi ako.
Ndinoda mabikirwo ako ese .. .. iwe wakanaka, ndinoziva kuti ndakasungwa pauri, pese pandinogamuchira email kubva kwauri, mufaro unopinda mumuviri wangu wausingakwanise kufungidzira. Ini ndiri shefu chaizvo uye chokwadi ndechekuti pane ese mabikirwo awakatuma, ndine mashoma kwazvo ekugadzira.
Kutenda nebasa rako.
Hi Silvia, ndinoda zano, ndine tray yeasparagus mufiriji inondiudza »ndibvise pano yaaaa !!
Uye yatove yakachengeteka neichi chidimbu, senguva dzose ini handigone kuwana chinongedzo muMiami uye ino inguva yemiriwo kirimu, ndechipi chimwe chandinoisa icho chakareruka?
Skimmed mukaka ??, emvura yakadzika mafuta? Handikwanise kufunga zvimwe zvakawanda zvandakaona kutenderera kuno, zvingave zvakaenzana here?
Nenzira, vhiki rapfuura ndakagadzira tsuro (kubva kuchina) nemakwenzi akanaka uye yaive yummy, ndakaiperekedza nechingwa muPyrex uye murume wangu akaiyamwa ndokuiita kuti inyorove.
Ndatenda maresipi ako !!
Pindura kuna SUSANA
Mhoro Silvia, yakawanda sei asiparagus yacho? Ndatenda nemabikirwo ako, kwaziso
Charo, izvozvi handina mashanga easparagus kumba kuti ndione magiramu asi ini ndinofunga kuti svumbunuro yega yega ndeye 400 gr, ndokuti, inenge 800gr yakawanda kana shoma yeresipi.
Mhoro Silvia, ndinonzwisisa kuti iwe unogona zvakare kugadzira lettuce kirimu, iwe unogona ndapota isa recipe, kana uchiziva, ndinochikoshesa, ndatenda zvikuru. Kutsvoda.
Pindura kuna marisa
Marisa, handisati ndambozviita asi ini ndawana nzira yacho kwauri. Ini ndaisa chinongedzo chako.
Ini ndinoda ese mabikirwo andinoedza, iwo akanaka asi anogona kugadzirwa nemafuta mashoma, iwo anozongoitawo seakanaka
Mune akawanda mabikirwo ini ndinowanzo deredza huwandu hwemafuta zvishoma uye iwo akanaka kwazvo. Zviedze.
Silvia, maita basa kwazvo, nekundipindura nekukasira, uri mukuru, mangwana ndichazviita, nekuti ndakatenga lettuce yakawanda pakutengesa, uye tinoifarira zvakanyanya, uye handina kurangarira maitirwo azvo, Ndikati, maita basa zvikuru, kutsvoda.
Uchatitaurira kuti zvave sei kwauri.
Ndakazviita iyi «kupera kwevhiki» uye yave iri budiriro huru ... sezvese zvandinoita pawebhusaiti yako.
makorokoto uye usambomira !!!
Pepi, kumba ino kirimu yave imwe yezvatinoda uye murume wangu haana kugadzirwa kubva pasiparagasi. Shuwiro yakanakisa
Ndakaigadzirira mangwana, yanga isina kirimu uye ndaishandisa 4quesitos.
Iko kunakidza kwakanaka! Zvinonaka. Ndagadzirira kuti idye mangwana.
Juana maria akadaro
Nhasi ndagadzira ichi chinonaka kirimu, uye chokwadi ndechekuti takaifarira zvakanyanya, kunyangwe ini ndaona nhare yeasparagus zvishoma, zvinogona kudaro nekuti ndaderedza huwandu hwemuto kuita kuti uve mukobvu? mwana.
Pindura kuna Juana Mary
kune organic soy uye oat creams. Kunyanya, iyo soya bhinzi kubva kuprovamel (santiveri) inoshamisa. Ramba uchifunga kuti soya ndechimwe chezvikafu zvinowanzoitika saka zita rekuti "organic" rakakosha. Vanoitengesa musupermarket yedare rechirungu
Mhoro Silvia, ndakagashira iyi yekubheka kare kare uye haina kundibata.
Asi rimwe zuva tezvara vangu vakauya nehombodo izere asparagus, chimbofungidzira, ndakagadzira asiparagasi yakakangwa, asiparagasi yakarungwa, muto weasparagus (zvakajairika muno muAndalusia), asi ini ndaive ndichine asiparagasi.
Zvakanaka, ndakatsvaga iyo yekubheka pane iyo blog uye ndakashinga kuti ndiigadzire ndisina kunyengera kukuru (ndinoreurura).
Chishamiso chakadii chandakave nacho neichi chidimbu, chakanyorovera uye chinonaka, ehe, chinonaka.
Ndinokuvimbisa kuti ndichazvidzokorora kanopfuura kamwe kwenguva yemwaka.uye pamusoro pezvose, chakareruka !! Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze.
María, ndinoreurura kuti pandakaona iyi yekubheka kekutanga, haina kukwezva zvakanyanya kana, asi pandakangozviedza ndakafara, pachokwadi ndine mabhureki easparagus mufiriji yakamirira ini kugadzirira kirimu.
Mhoroi vasikana, ndanga ndichida kukuudzai nezve shanduko yandakaita muresipi, chikonzero, ndiri pachikafu uye kunyangwe ndaive nekirimu kirimu kumba (11%) ndafunga kuibvisa, ndakatsiva nemukaka wakaomeswa uye mukaka wakatsetseka (175 gramu muhuwandu) handizive kuti zvichave sei nekirimu asi yaive yakanakisa nenzira iyoyo ndakarangarira hunyengeri uhwo hwawakandipa sezvo ndisiri kuwana mukaka wakasviba pano.
saka hapana kana mumwe munhu achida kubvisa mamwe macalorie, iwe unoziva ... ndatenda zvakare nezvako zvekubika
IZVO ZVAKANAKA TOOOOODOOOO
Iyo yekubheka inotaridzika, ndinodya kumba uye ndinoda kuzviita asi ndine kusahadzika. Muto wemuriwo unotengwa mvura kana piritsi kana kuti unofanirwa kuitwa uye imwe asparagus yekushongedza haina mbishi, yakabikwa ...
Ini ndinowanzo gadzira muto pamberi nemvura uye yemuriwo stock cube uye yekushongedza asiparagasi mashoma aunotora usati waakuya.
Pane chero munhu akaedza kuchinja kirimu yezai chena kuti aone chii?
Sezvazviri ... Iyo yekubuda inobuda deliciousaaa !! Pfungwa yekusausa asparagus yolks kuti ugone kuzviisa gare gare pane kirimu yakanaka. Ini ndaperekedza negariki croutons uye inodonha yemafuta emuorivhi…. Zvinoshamisa !!! Ndatenda!!
Ndatenda zvikuru Peter 😉
Yakanaka kwazvo recipe !! Nezve vegan cream ini ndaida kutaura. Ive nekuchenjerera nekamuriwo yemuriwo yeMercadona nekuti inogadzirwa nemafuta emiriwo, kusanganisira mafuta emichindwe, ayo asisiri maricho akareruka sezvo muchindwe une cholesterol yakawanda. Ini ndinoshandisa almond kana soy cream kana oatmeal yavanotengesa mune chero mishonga yemakwenzi uye ine hutano.
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti kurema kwakadii "masumbu maviri", ndine 750 gr bag. uye ini handina ruzivo rwekuti vangani asparagus vanopinda muboka, nekuti ndinofungidzira vanozoenderana nehukuru.
Iwo mabundu anenge mazana mana magiramu. Saka zveresipi iwe unoda nezve 400 magiramu.
Mhoroi apo! Nhasi ndagadzira iyo yekubheka kune iyo tsamba uye haina kuravira sechinhu chero chipi zvacho! Handina kucherechedza kuti asparagus yairema zvakadii nekuti kubvira pandakaisa mabundu maviri, ndizvo zvandiinazvo.
Zvisinei, pane mazano ekuchengetedza kirimu kana kuirasa?
Pindura kuna Hermi
Gungwa mabass mupapillote